Waraanni Liyyuu Poolisii naannoo Somaalee Aanaa Qumbii keessatti haleellaa raawwaate - NuuralHudaa
Waraanni Liyyuu Poolisii naannoo Somaalee Aanaa Qumbii keessatti haleellaa raawwaate
Last updated Aug 29, 2018 66
Waraanni Liyyuu poolisii aanaa Qumbii magaalaa Minoo seenuun meeshaa waraana gurguddaan haleella kan raawwate tahuu maddeen gabaasan. Haleellaa kanaanis milishaan aanichaa 2 wareegamuu fi namoonni 4 madaa’uu odeeyfannoon argame ni addeessa.
Namoonni ajjeefaman Hurree Huseen fi Baraataa Mu’aaz Badruddiin yoo tahan, kanneen madaayan ammoo Abdii Aadam, Shaafii Aadam. Aliyyii Ahmaddiin fi Alii Muhammad tahuu odeeyfannoon naannicha irraa nu dhaqqabe ni mul’isa.
Gama biraatiin ammoo prezdaantii bulchiinsa naannoo Somaalee duraanii Abdi Illee dabalatee qondaaltonni naannichaa afur guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatan. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaalee barbaachisaa tahan guutachuudhaaf mana murtii guyyaa kudha afur kan gaafate yoo tahu, Abdi Illeen ammoo dhibee Garachaa fi Dhiibbaa dhiigaatiin dararamaa waan jiruuf mirgi wabii naaf haa eeggamu jechuun gaafate. Manni murtichaatis gaaffilee gama lamaanii irratti murtii kennuuf boru waaree boodatti beellamee jira.
Weerara Liyyuu Poolisii NS
July 6, 2022 sa;aa 4:57 am Update tahe